Arday Sacuudiyaan ah oo la sheegay in ay magangalyo weydiisteen dalka Canada… – Hagaag.com
Arday Sacuudiyaan ah oo la sheegay in ay magangalyo weydiisteen dalka Canada…
Iyadoo maalintii doraato oo ay taariikhdu ku boogneyd 31/08/2018 ay ku ekeyd mudadii dowladda Sacuudiga u qabatay in ay dalka Canada kaga baxaan ardaydeeda ayaa waxaa iminka soo ifbaxaya in ku dhowaad 20 arday ay dalkaasi ka dalbadeen magangalyo xilli ay buuxiyeen araajiyada magangalyo-doonka.
Ardaydan ayaa magangalyada dalbaday ayaa ku andocoonaya in noloshooda waxbarasho khal-khal la geliyay sababo la xiriira iskudhac siyaasadeed oo u dhexeeya Sacuudiga iyo Canada, ayna doonayaan in ay sii wataan waxbarashadooda oo tacab faro badan geliyeen.
Xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa dalalka Sacuudiga iyo Canada ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii dowladda Sacuudiga ay “cunaqabateyno” hor leh ay kusoo rogtay dalka Canada oo ay sheegtay in uu faraha lasoo galay arrimeheeda siyaasadda gudaha.
Dowladda Sacuudiga oo horay u eriday safiirkii Canada ee Sacuudiga islamarkaana keeda u yeertay, joojisayna dhammaan duulimaadyadii iyo maalgashigii ay ka waday dalkaasi ayaa iminka waxa ay cunaqabateynadaasi kusoo kordhisay in 16-kun oo arday Sacuudiyaan ah lagu wargeliyo in ay waxbarashadooda u wareejistaan dal kale, waxaana sidoo kale ay dowladda Sacuudigu ku amartay muwaadiniinteeda dalka Canada u jooga adeegyada caafimaadka dalkaasi laga rarayo islamarkaana caafimaad loo geynayo dalal kale.
Xukuumadda Canada oo dooneysa in xal laga gaaro arrintan ayaa caddeysay in aysan marnaba u sajuudi doonin asaageeda marka ay noqoto u hiilinta xuquuqda aadanaha:
“Waxaan dhaqan iyo caado u leenahay oo dadkeena lagu yaqaanaa u hiilinta xuquuqda aadanaha, waxayna mar walba naga sugaayaan in aan qadiyadda xuquuqda aadanaha si cad oo kulul uga hadalno islamarkaana aan cidna u daba fariisan”, sidaa waxaa yiri R/ wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau.
Dowladda Sacuudiga ayaa dhankeeda taagan in lagu daweyn karo boogtan oo kaliya dowladda Canada oo raalligelin ka bixiso khaladka farogelin ee ay sameysay.
Raalligelin ayuu meesha ka saaray R/wasaaraha Canada in ay ka bixinayaan qoraalkii xiisaddan dhaliyay ee ay soo saareen islamarkaana ay ku adkeysanayaan, kuna taagan yihiin qoraalkooda.
Xiisaddan u dhaxeysa labada dal ayaa timid kadib markii dowladda Canada qoraal ay soo dhigtay barta twitterka ay ku muujisay walaac dhanka xuquuqul insaanka taas oo ku aadan xarig loo geystay shakhsiyaad Sacuudiyaan ah kuwaas oo u ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha, waxaana dadkaaso la xiray ka mid ah Nassima al-Sadah iyo Samar Badawi iyo kuwo kale.